Manazava ny fomba fiarovana ny ordinateranao ny virosy sy ny virosy ary ny zana-tsipika
Maro amin'ireo orinasa manana tranonkala e-varotra mahomby no mijaly noho ny fahavoazana goavam-be rehefa voatafika toy ny viriosy zombie. Ny virosy dia programa fanoritsoritana ratsy, izay manatanteraka asa maro tsy ilaina ao amin'ny ordinatera. Tahaka ny hacking, manimba ny fahalemen'ny rafitra ireo zebra ireo. Ny virosy dia mety hanimba ny fahamendrehan'ny mpivarotra rindrambaiko. Maro ny rindrambaiko momba ny fanafihana virosy viriosy no malaza ratsy. Ny SEO amin'ny tranokalan'ny tranonkala iray dia mety ho levona rehefa manenjika ny server ny viriosy. Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny fiarovana ny solosainao amin'ny fanafihana virosy dia afaka mitazona ny fiarovana ny mpanjifa mampiasa ny tranokalanao.
Niparitaka tamin'ny alalan'ny fizarana rindrambaiko ny virosy tamin'ny voalohany. Ny sora-tanana sasantsasany dia afaka manao kopia ny tenany ary hifindra any amin'ny solosaina. Toy izany koa, ireo sora-tanana ireo dia mamono trangan-javatra hafa sy tratran'ny otrikaretina VIH. Amin'ny alàlan'ny fitahirizam-piraketana an-tsokosoko fahiny, ireo hackers dia handalo ireo viriosy ireo any amin'ny solosaina. Ireo viriosy zamby ireo dia hampitombo ny mari-pamantarana. Miaraka amin'ny fahatongavan'ny aterineto, dia lasa mora tahaka ny ABC ny viriosy. Amin'izao fotoana izao dia maro kokoa ireo orinasa mampiasa tranonkala e-commerce miatrika fanafihana hack toy ny viriosy zonbi.
Virosy eo amin'ny sehatry ny varotra
Amin'ny tranga sasany dia miaina ny fanafihana an-tsokosoko toy ny fanafihana ny tolotrasa amin'ny fanompoana ny servisy. Ny fanafihana toy izany dia ahitana andiana botnets izay manatanteraka hetsika marobe maro..Botnets dia solom-borona an-jatony manana endrika manokana izay ahitana ny fanasitranana ataon'ny olona. Noho izany, ny mpitsidika mahita ny fitsidihana aterineto ho toy ny fifamoivoizana ara-dalàna. Misy ihany koa fomba hafa ampiasain'ny olona mba hahatonga ireo tranonkala ho ambony ao amin'ny SERPs. Botnets dia afaka mampandefitra toy izany fomba fampitam-baovao nomerika ary mahatonga ny orinasa hiteraka fahavoazana. Ohatra, ao amin'ny fanafihan'ny DDoS, hackers dia mandefa bolana an-tapitrisany any amin'ny mpizara iray izay tsy afaka manatanteraka ny fifamoivoizana.
Virosy eo amin'ny sehatra sosialy
Amin'ny toe-javatra hafa, ireo niharam-boina dia niharan'ny fanafihana mampidi-doza mamela votoaty. Ny viriosy dia lasa ampahany manan-danja amin'ny fiaraha-monina satria mbola misy orinasa sasantsasany mampiasa azy ireo hamita ny asany sasany. Amin'ny tranga hafa, ireo mpampiasa tranonkala sy ireo manam-pahaizana amin'ny solosaina dia mandrisika ny mpampiasa hanangana programa manokana toy ny rindrambaiko antivirus. Ity rindrambaiko ity dia manampy amin'ny fanesorana ireo endrika maro amin'ny fivoaran'ny tranonkala. Manampy ireo solosaina ihany koa izy ireo mba ho voaro amin'ny sasany amin'ireo fanafihana ireo. Ny hackers dia afaka mametraka viriosy any amin'ny serivera na ny rahon'ny ankamaroan'ny ordinatera. Azon'izy ireo atao ny mampiasa ireo tranonkala eo ambanin'ny fepetra mitrandrahana sarobidy.
Ny raharaham-barotra e-varotra dia tsy maintsy miasa amin'ny fepetra fiarovana manokana. Misy karazana vulnerabilities maro manodidina ny ordinatera sy ny server. Ny data dia afaka mandalo amin'ny dingana rehetra amin'ny fikarakarana azy. Betsaka ny orinasa mampiasa vola be amin'ny fampiasana rindrambaiko anti-spyware. Amin'ny toe-javatra hafa, mandoa vola amin'ny programa Antivirus ny olona hanatsarana io fiarovana io. Na izany aza dia mihamitombo hatrany ny viriosy. Isan'andro, ireo hackers sy ireo manam-pahaizana manokana dia mamelabelatra ireo fitrandrahana izay manohintohina ny fiarovana amin'ny fampiasana tranokala iray. Misy fitaovana maro maimaim-poana izay azon'ny ankamaroan'ny olona mahazo sy mampiasa azy ireny. Azonao ampiasaina io toro lalana io amin'ny fiarovana ny ordinatera amin'ny viriosy, kankana, ary zombies Source .